डा केसीलाई खुला पत्र - "महाराजगन्ज कलेजले लिएको प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र चोरि हुँदा तपाईंले नियुक्ती गरेको अग्रवाल माथि किन प्रश्न उठाउनु भएन ? - Nepal Insider
कालापानी र लिपुलेकपछि भारतको नजर इलाममा, नेपाली भूमिमा नेपालीलाई नै प्रवेश निषेध !
हतियारसहित पक्राउ परेका तरुण दलका नगर सभापति सन्दीपजङ्ग कारागार चलान
Home/समाचार/डा केसीलाई खुला पत्र – “महाराजगन्ज कलेजले लिएको प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र चोरि हुँदा तपाईंले नियुक्ती गरेको अग्रवाल माथि किन प्रश्न उठाउनु भएन ?
तपाईंले नै एउटा बिभागको नेत्रित्व सम्हालेको सरकारी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान महाराजगन्जले एक बर्ष अघी लिएको एकिक्रित प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र चोरि भयो। त्यो परिक्षा गराउने जिम्मेबार ब्यक्ती तपाईंले नै अनसन बसेर नियुक्त गरेको डिन डाक्टर अग्रवाल हुन। सरकारी कलेज महाराजगन्जमा प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र बिक्री हुन्छ। यती मात्रै हैन, वार्षिक परिक्षाको प्रश्नपत्र समेत बिक्री हुने कुरा सामान्य झै बनेको तथ्य सारालाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
महाराजगन्ज कलेजले लिएको प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र चोरि हुँदा तपाईंले नियुक्ती गरेको अग्रवाल माथि किन प्रश्न उठाउनु भएन, तपाईं आँफैले समेत यस बिषयमा किन चुं बोल्नु भएन ?
यो देशमा गोबिन्द केसी भन्ने नामको ट्याग झुन्ड्याएका सबै असल हुने, बाँकी सबै बेकामे ? दोस्रो प्रवेश परिक्षा २ महिना ढिला हुँदा कैयौ बिद्यार्थी बिदेश भासिये, कसले लिने जिम्मा ? तपाईंले नैतीकताको जिम्मेबारी बोक्ने नि नबोक्ने ?
दोस्रो बिषय – तपाईंकै सरकारी कलेज महाराजगन्जले छात्रब्रित्तिमा भर्ना गरेका ३६ जना विद्यार्थी मध्य एकजना विद्यार्थी देखाउनुस जसले सरकारी बिद्यालय पढेका हुन वा गरिवका छोराछोरी हुन। त्यती मात्रै हैन, त्यही महाराजगन्जमा एउटा सिट छ गरिवको निम्ती आरक्षण छुट्याइएको। त्यो एउटा सिटमा समेत प्रवेश परिक्षा पास गरेका गरिव विद्यार्थी एकजना पनि भेटिएनन भनेर सो सिटमा ८० हजार अमेरिकि डलर लिएर बिदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा सर्बोच्चमा मुद्दा परेको थियो। अर्थात तपाईंले गरेका बकबासले के देखाउछ भने जो गरिव हुन, ति मेरिट लिस्टमै आउँदैनन (किनकी गरिवका छोराछोरी सरकारी बिद्यालय पढ्छन), जो प्रवेश परिक्षामा पास हुन्छन ति एकजना पनि गरिव नै हुँदैनन।
दुनियाँलाई यो पनि बताउनुस, तपाईंले राखेका माग वा माथेमा प्रतिबेदनको कुन बुँदाले आज गरिवका छोराछोरिले डाक्टर पढ्न पाउछन ? अब दुनियाँलाई फेरी बताउनुस, तपाईंको तमाशा घुमाएर माफिया पोस्ने हो कि हैन ? तल निजी बिद्यालय सन्चालन गरेर लुट्ने, माथि तिनैका छोराछोरिलाई राज्यका गरिवले तिरेको करले चलेका सरकारी मेडिकल कलेजमा समेत सित्तैमा पढाउने र नक्कली नारा लगाउने कि म गरिवका छोराछोरिको स्वास्थ्य शिक्षाको निम्ती लडेको ? यस्ता बकबास अब बन्द गर्नुस।
बालीमा रातो विकिनीमा मस्त खुलेकी साम्राज्ञी इन्स्टामा भाइरल (हेरौ ८ तस्बिरमा )
अमेरिकामा दुई वर्षीय नेपाली बालक गाडीभित्र मृत फेला
फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीमा आज सार्वजनिक बिदा